N'èzí Portable Large Capacity 25L ịsa ahụ akpa
Nnukwu ike ịwụ egwuregwu egwuregwu n'èzí, lita 25 nke ikike iji gboo mkpa gị. Ihe PVC, eyi na-eguzogide ọgwụ, na-adịgide adịgide ma adịghị mfe nká. na-anọ ogologo oge. O doro anya na ngwaahịa a na-eme ka obi ụtọ nke egwuregwu n'èzí dịkwuo elu.
Ọnụ ọgụgụ: BTC097
New Gray ozuzo Large-ikike Waterproof Akpa
Akpa akpa mmiri na-enweghị mmiri, nke ihe eji eme akwa PVC, ihe eji egbochi mmiri na iyi akwa, anaghị adị mfe imebi. Enwere nkọwa atọ nke 20L, 40L, na 60L iji gboo mkpa njem gị dị iche iche. Akpa mmiri na-adịghị mma maka ọnọdụ dị iche iche dị ka ugwu ugwu, njem, ahụike, ọzụzụ, wdg.
Nọmba ihe: LXD0200202002
Ike: 20L / 40L / 60L
Agba: acha anụnụ anụnụ / ahaziri agba
Ojiji: travelinggagharị n'èzí